sanduuqa barafka si toos ah cookies loogu talagalay cookies samaynta ma ...
line-soo-saarka maamoul awoodda Small
desktop automatic kubba yar kibbeh encrusting Mach ...
automatic cookies sanduuqa barafka loogu talagalay mashiinka cookies qaadashada
Min.Order Tirada: 1 set/order
Shuruudaha Payment: T/T, L/C,D/A,D/P,
cookie The loogu talagalay in la beddeli karaa noocyada design. Waxa ay u muuqataa siyaabo badan si ay u sameeyaan cookie ah, qaar ka mid ah dukaamada yar yar iyo hooyooyinka dhigi cuntada by gacanta, waxa uu leeyahay qiimo la yaab leh oo dadka da'da kala duwan sida cuntada this.
tirada model BK-280
Capacity 5000-6000pcs / h
miisaanka Product 5-200g / pc
waqti Lead Muddo 7 maalmood oo shaqo haddii mashiinka 1 set
aragti 167 * 92 * 129cm
miisaanka Machine 400kg
1) daboolida Ilaalinta iyo Stop Emergency Button hawlgalka nabad ah.
2) Miisaanka, size iyo qolof-buux-ratio la haboon toosin karin sida loo baahan yahay.
3) duwan: shaqeeyaan si loo soo saaro noocyada kala duwan ee cuntada by beddelo wasakhahaasi fudud.
4) awoodda Big
5) noocyo badan cookies wasakhahaasi loo qaabeeyay kartaa.
6) mashiinka kartoo, waxaan ku dari kartaa nidaamyo mashiinka qaar ka mid ah oo ku saabsan mishiinka.
7) English, Chinese, af Carabi waa optional ..
8) tababar lacag la'aan ah waxaa lagu siin doonaa marka mashiinka baaritaanka macaamiisha.
Previous: Mashiinka qaadashada bar midho taariikhda si toos ah bar
Next: cookies qaloocin Mashiinka qaadashada Automatic
Chocolate Buuxinaya Cookies Machine
cookies Buuxinta Machine
Cookies Samaynta Machine
Waxaa loo Cookies Machine
Buuxinaya Cookies Machine
cookie Small Encrusting Machine
Cookies Small Machine
Small Double Buuxinta cookie Machine
Small Buuxinaya Cookies Machine
Small Buuxinta cookie Encrusting Machine
Wire magaabay wiil Cookies Machine
Mashiinka qaadashada cake cananaaska automatic
ukunta iskooj Automatic encrusting buux adag m ...